Bonanza Megaways bụ a oghere game Big Time Cha Cha nke na-eji ụlọ ọrụ Megaways engine. Nke a bụ engine niile banyere ọtụtụ emeri n'ịgwa. Ị na-a humongous 117,649 kwere omume ụzọ iji merie na egwuregwu a. The egwuregwu na-nwere free spins Njirimara na-abịa na ịgbasa wilds. Ọfọn, ebe a bụ ihe. Nke a egwuregwu na-atụmatụ nke ukwuu n'anya Superbet feature. Gịnị na-agaghi ahu n'anya banyere nke a tọhapụ Big Time? E nwere ike ịbụ ụfọdụ. Dị nnọọ na-agụ na chọpụta.
Banyere Developer nke Bonanza Megaways
Kere Big oge egwu egwuregwu, a oghere nwere ọtụtụ ihe na-atụ anya. Ha nwere ọtụtụ otutu egwuregwu ha n'aka.
Nke a Superbet oghere egwuregwu nwere 6 esi anwụde na dịghị ofu-akwụ edoghi. Kama nke 6 esi anwụde enweghị usoro Njirimara gburugburu 2 ka 7 akara nke na-na-agbanwe agbanwe na nke ọ bụla atụ ogho. Ya mere,, na ọtụtụ ụzọ iji merie na-agbanwe na nke ọ bụla atụ ogho. Iji nweta, ị ga-ala otu akara na n'akụkụ esi anwụde. Mgbe ọ bụla akwụ, nnọchianya na nke rụpụtara n'ime mmeri na-blasted si esi anwụde na ndị ọzọ na akara Cascade si n'elu. Nke a na-aga ruo mgbe e nwere ndị mba na-emeri ihe n'ịgwa ekpe. Nke a na-akpali akpali Superbet egwuregwu nwere ike na-egwuri maka dị ka ala dị 20p kwa atụ ogho ka ihe dị ka 500 £ kwa atụ ogho.
Ọ bụ nnọọ anya na-adọrọ mmasị. The mines ime ka zuru okè ọnọdụ dị otú ahụ edinam juru n'ọnụ oghere egwuregwu. Egwu na-akpọ kaadị ụkpụrụ ka elu ala uru na akara na nke a Superbet game mgbe elu uru na akara na-niile bara nnukwu uru. The ụkpụrụ na-niile megide konkiri na anya nnọọ gold. N'elu-esi anwụde a cart na-kwụsịtụrụ na 4 iche iche na akara na ọ. N'oge ọ bụla atụ ogho, kaadị tụlee akara ala na-esi anwụde dịkwuo gị nke Ohere nke na-emeri.
Ọ nwere ihe abụọ isi bonus atụmatụ. First e anụ akara nke-eme dị ka a dochie ndị ọzọ niile na akara ma e wezụga dynamite akara.
Mgbe ahụ e nwere ikposa nke bụ akwụkwọ ozi G, The, L, na D. Ọdịda niile anọ n'ime ha na n'out oge na-esi anwụde akpali free spins gburugburu na nke ị ga-esi 12 free spins. mgbe ahụ, n'ezie, e nwere Superbet mma nke ndị dị otú ahụ ihe akụkụ nke egwuregwu.
Ọ bụ a nwee wuru oghere egwuregwu na-adabere na ya pụrụ iche egwuregwu engine na-adọta egwuregwu. Na ọ na-eme ya kama ọma. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị fun na-akpali akpali Superbet oghere egwuregwu nwere si Big Time banner.